Hexagonal wire mesh dia iray amin'ny harato tariby misy lavaka hexagonal. Ity karazana tariby hexagonal harato ity dia tenona amin'ny tariby vy, tariby vy vy ambany na tariby vy tsy misy fangarony. ary pvc mifono.Raha misafidy ny di ...
Welded wire mesh dia lasakan'ny tariby vy, tariby vy. Ny lavaka harato dia toradroa. Ny fitsaboana amin'ny tany dia azo alefa amin'ny alàlan'ny herinaratra, naroboka mafana ary nopetahana pvc. Ny anti-harafesina tsara indrindra dia ny pvc mifono tariby vita amin'ny tariby. Araka ny endrik'ilay tariby tariby vita amin'ny vy, azo zaraina anaty harato vy ...
Ny fampirantiana dia tena zava-dehibe amin'ny orinasanay, manatrika fampirantiana saika isan-taona izahay. Izahay dia ao Batimat amin'ny 4 ~ 8, Nov, 2019 BATIMAT, fampirantiana maritrano biennial any Paris, France, dia karakarain'ny The Reed Exhibitions Group, izay nahavita 30 ...